အစ်မက စာရေးဆရာမကြီးဆိုတော့ အိမ်မက်ထဲတောင် ဇာတ်လမ်းနဲ့ ... ညီမကိုလဲ အိမ်ကလူက ခဏခဏပြောတယ်။ ညည်းက အိမ်မက်တောင် ဇာတ်လမ်းလုပ်မက်တယ်တဲ့။ မှန်ကွဲတွေတောင် အိမ်မက်ထဲပါသေးနော်။ ထူးတော့ထူးဆန်းတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဘာစွဲလို့ မက်မှန်းမသိဘူး။
အိမ်မက်တွေထဲမှာ စာမေးပွဲဖြေတဲ့ အိမ်မက်တွေကတော့ အဆိုးဆုံးပဲ။
ကော်ကော် အဲ မသီတာအိပ်မက်ကိုလာဖတ်သည်။ ကိုဧရာကလည်းပါရသေး။ အဟိ
တီဆွိရေ... စိတ်စွဲကြီးတာလား ဘာလည်းတော့မသိ...ကြုံတွေ့လိုက်တာတွေကို ကိုယ်က အမှတ်တမဲ့ပဲလို့ ထင်ပေမဲ့လည်း အိပ်မက်ထဲ ဟန်ကျပန်ကျ ပြန်မက်နေပြန်ရော...
ဟိုနေ့က DVB က အင်တာဗျူးကို အိမ်ကလူ ကြည့်နေလို့ အနားခဏသွားရပ်ကြည့်မိတယ်...အင်တာဗျူးတဲ့ အမျိုးသမီးက သူ့ကိုယ်သူ ကျွန်တော် လို့ ပြောတာ ကြည့်မိတယ်ပေ့ါ...
ညကျတော့ အိပ်မက်ထဲမယ် မသီတာတယောက် ကျွန်တော် ကျွန်တော် နဲ့ မိုက်ခရိုဖုန်းကြီး ဟိုသူ့ပါးစပ်ရှေ့ထိုး ဒီသူ့ပါးစပ်ရှေ့ထိုးနဲ့ အင်တာတွေဗျူးနေတော့တာဗျိုး...
မယုဝရီရေ... ကော်နီသီချင်းမှန်း သိသူရှိလို့ ပျော်သွားတယ်..ဒီက ရေးသာ ရေးရတာ..သိကြပါတော့မလားလို့ :)
ဆိုသာ ဆိုရတယ် ရှက်စရာကြီး :P
သီတာက သီချင်းတွေ မှတ်မိနေသေးတာကိုး...
အိပ်မက်ထဲလဲ သူနဲ့ အတူတူပေါ့လေ... စာထောက်ပေးတာတောင် ပါလိုက်သေး...
ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့်အိပ်မက်တွေက စင်းလွန်းလို့ အိပ်မက် မက်ရမှာကြောက်တယ်... ဒါကြောင့် အိပ်ချိန်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့ထားတယ်... ဟမ်...
ကိုယ့်အားကိုယ်မကိုးပဲ သူချည်း အားကိုးတာ အိပ်မက်ထဲတောင်...ကောင်းပါဘူးအေ။
သက်ဝေကို သူငယ်ချင်းမို့ အိပ်မက်ကို ဆက်ပြောပြမယ်သိလား... ကိုယ့်ကို ခေါ်လာတဲ့ ဆရာက ပါမောက္ခဆရာကြီးကို ပြောတာပေါ့...ဒီကျောင်းသူပေါ့ စာသိပ်ညံ့တာပဲ ဆိုတော့...ဆရာကြီးက ညံ့မှာပေါ့..စာမှ မကြည့်...စာမှ မဖတ်တာတဲ့။
သူများတွေ Ph. D တက်ရတယ်ဆိုတော့ ၀မ်းသာပြီး ကိုယ်ညံ့တာတွေ တန်းစီအိပ်မက်တော့တာပဲ
(btw, ဒီဇင်ဘာ ဆရာကန်တော့ပွဲ ကိုယ်က မြန်မာပြည်ပြန်မှာ...အခုကတည်းက စိတ်မှန်းနဲ့ပဲ ကန်တော့နေပါတယ်း))
မေးလ်က ရေးမရ ။
ပေါက်... ရေစင် ရေချမ်း မပါတဲ့အကြောင်း ရေးဦးမှာ :P
ဟ ဟ သီတာကတော့ လုပ်ပြီ ဒါနဲ့ မကော်ရဲ့ သီချင်းက တွေးတွေးပြီး ရှက်လိုက်တာ ကိုကိုရာ....ပါ။ ဒါမှမဟုတ် တွေးတွေးပြီး ရှက်လိုက်တာ ကိုဧရာ...ဆိုလည်းဟုတ်သေး ဘယ့်နှယ် EEရာ ဖြစ်နေတာတုန်း သီတာရဲ့...
EE က မသီတာလေ
ကိုယ် ကျိန်တွယ်ပြီး ပြောပါ့မယ်း)
အိမ်မက်လေးထဲမှာ မသီတာရဲ့မရှိမဖြစ်ကိုဧရာနဲ့ အတန်းအတူတူတက်နေရတာ ကြည်နူးစရာ...
တကယ်တန်းမှာတော့ သူနဲ့ အတန်းတူတူ တက်ဖူးပေါင် :)
မသီတာ ရေးတဲ့ အိမ်မက် အကြောင်းလေး တွေ ဖတ်သွားတယ်
13 Aug 10, 20:15
seesein: ရွှေပြည်က ကျောင်းသွားတက်လို့ ထိပ်ကနေရင် ဒါမှ ရွှေပြည်သားကွလို့ ကြွားကောင်းတယ်ဗျာ
seesein: ရွှေပြည်သူရွှေပြည်သားများ ဘေးမသီရန်မခ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြစေဗျာ
S-C: ဟုတ်ပါတယ်...တောင်းတဲ့ ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါလို၏ seesein
မန်းကိုကို: ထူးဆန်းတဲ့အိပ်မက်အကြောင်း လာဖတ်သွားပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ အိပ်မက်တွေ မမက်တာလည်းကြာလှပေါ့။
S-C: မန်းကိုကိုရေ...ဒီမှာတော့ မက်သလားအမေးနဲ့ မက်ပြီးပြီလေ...ဆိုသလို...ခေါင်းက ခေါင်းအုံးနဲ့ မထိရသေးဘူး... အိပ်မက်က မက်ပြီ...ပိုပိုသာသာလေးပေါ့ အလကားပဲတင်း ရေးရတာပဲဟား)
မမသီတာ အိပ်မက်ထဲတောင် အတူတူထည့်မက်တာကိုး။ အိမ်မက်က စိတ်ဝင်စားစရာနော်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေ ဘာတွေနဲ့ ခေတ်အညီ အိပ်မက် မက်တတ်သူ မမသီတာ။ :)
သီတာပြောပြတဲ့အဖြစ်တွေ လာနားထောင်သွားပါတယ်။း)
အိပ်မက်ထဲတောင် ဆရာကိုဧရာက စာ ထောက်ပေးနေသေးတာကိုး။ ကံကောင်းလိုက်တာ မမရာ။
10 Oct 10, 10:01
ktmyint: ma thida, how r u? now in ygn. hla hla sunn is now in pha ahn. can open ur link only now. best wishes to all.
10 Oct 10, 12:43
S-C: Ahma Ktmyint, very glad to see u. Thank u for ur continuous support. U r great both for family and friends around you. :)
10 Oct 10, 15:32
khinmarlaraung: ရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်ရှင်။ :)
10 Oct 10, 17:32
ktmyint: i am very happy to listen to Q and A b/w rector sayadaw and u keiti thara. pl giv my deep respect to u razeinda ( smc ) when u go there.
10 Oct 10, 19:11
S-C: sure Ahma, even today I reached there.
10 Oct 10, 19:54
ktmyint: just read the article 'ate met htair taung ' in appreciation of 'pyae phyo nay yaung ' who is now in 'yales uni '.
ktmyint: i wish i could write like u. will be trying to share my life challenges.
10 Oct 10, 20:44
S-C: ရေးပါအမ... အမရေးရင် ပန်းချီတွေပါ ပါမှာ... :)